Ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya oo sheegay in saraakiil sare oo katirsan Al-Shabaab lagu dilay Shabeellaha Hoose - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaCiidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya oo sheegay in saraakiil sare oo katirsan Al-Shabaab lagu dilay Shabeellaha Hoose
Ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya oo sheegay in saraakiil sare oo katirsan Al-Shabaab lagu dilay Shabeellaha Hoose
August 11, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Maleeshiyo Al-Shabaab ah. [Sawir Hore]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamada milatariga Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in saraakiil sare oo katirsan Al-Shabaab ay dileen.
Saraakiil katirsan ciidamada ayaa warbaahinta dowladda u sheegay in Macalin Xuseen oo loo yaqaan Shiikh Nuur kanatirsanaa sirdoonka Al-Shabaab ee “Amniyaat” lagu dilay howlgal ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose.
Sarakiisha ayaa sidoo kale sheegay in howlgalka lagu dilay Farxaan Daahir Xiirane, oo isna katirsanaa sirdoonka Al-Shabaab.
Ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM ayaa dagaal kula jira maleeshiyada Al-Shabaab.
Maleeshiyada ayaa laga saaray inta badan magaalooyinka kuyaala koonfurta Soomaaliya balse waxay weli heystaan deegaano badan, iyaga oo qaraxyo iyo dilal qorsheysan ka fuliya caasimada Soomaaliya ee Muqdisho oo mar ay maamuli jireen kahor intaan dibada looga saarin sanadkii 2011-kii.
April 22, 2018 Olgan Bekar: Turkigu wuxuu door-bidaa in uusan farogelin siyaasadda gudaha Soomaaliya
December 2, 2017 Madaxweynaha Puntland oo gaaray Muqdisho si uu uga qeybgalo shirar ka dhici doona halkaas
Sargaal sare oo katirsanaa ciidamada maamulka Somaliland oo goostay
Muqdisho-(Puntland Mirror) Sargaal katirsan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in ay heleen xoggo ku sabsaan halka uu joogo hoggaamiyaha maleeshiyada Al-Shabaab. Taliyaha qeybta 43-aad ee ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya Janaraal Ismaaciil Saxardiid ayaa wareysi [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dowladda Soomaaliya ayaa u digtay dadka dhaqaalaha siiya ururka hubaysan ee Al-Shabaab. Shir jaraa’id oo ay si wadajir ah u qabteen saraakiil katirsan dowladda oo xalay ka dhacay Muqdisho, ayaa taliyaha haayada nabadsugida NISA [...]
Garoowe-(Puntland Mirror) Hal badmaax oo u dhashay dalka Iran ayaa dhintay kadib markii ciidanka badda Puntland ay rasaas ku fureen dooni loo maleynayo in ay tahay kalluumaysi sharci daro ah, sida uu sheegay sargaal katirsan [...]